​सुनसरी ३ को मतगणना सुरु गर्न आयोगको निर्देशन, अझै सुरु हुन सकेन
सुनसरी । सोमबारबाट स्थागित भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना सुरु नहुँदै पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मतगणना तत्का सुरु गर्न निर्वाचनआयोगले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै सुरु गर्न लागिएपनि
शिल नमिलेको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भएपछि मतगणना अवरुद्ध बनेको हो....
​सुनसरीमा अहिले सम्मको ताजा मतपरिणाम बिस्तृतमा
​मोरङमा मतदाता शिक्षाका लागि एक करोड बढी खर्च, २४ हजार बढी मत बदर
इटहरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्रिय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले मतदाता शिक्षाका लागि मोरङमा एक करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । बदर मत नहोस भनेर मदतादा शिक्षाको लागी कार्यालयले एक करोड २५ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरेको थियो ।
तर, यति ठुलो....
​वामपन्थी सरकार पुसको पहिलो हप्ताभित्र – ज्ञवाली
गुल्मी । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले पुसको पहिलो हप्ताभित्र वामपन्थी सरकार गठन हुने बताएका छन् । गुल्मी क्षेत्र नं. १ का नवनिर्वा्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले देशमा वामपन्थीहरुको जित दुइतिहाईको नजिक पुगिसकेकाले अब वामपन्थी सरकार गठन हुने बताएका हुन् ।
गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा....
अझै सुरु भएन सुनसरी क्षेत्र नं. ३ को मतगणना, आठ बजे बैठक बस्दै
इनरुवा । सुनसरी क्षेत्र नं. ३ को मतगणना स्थगित भएको २० घण्टा वितिसक्दा समेत अझै मत गणना हुन सकेको छैन । सात वटा मतपत्र अर्धकट्टी सहित भेटिएपछी मतगणना स्थगित भएको थियो । ३ नम्बर क्षेत्रमा एमालेकी भगवती चौधरी र कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच कडा प्रतिस्पर्धा....
​फरार सूचीमा रहेका चौधरी विजयी
कैलाली । प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका रेशमलाल चौधरी प्रतिनिधि सभा सांसदमा निर्वाचित भएका छन् ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले खोजिरहेका चौधरी मंगलबार बिहान सार्वजनिक भएको मतपरिणाममा प्रतिष्पर्धी एमालेकी मदनकुमारी शाहलाई २१ हजार मतान्तरले पराजीत गर्दै राजपाबाट विजयी भएका हुन्।
​काँग्रेसका राजिव कोइरालाले आफ्नै पार्टीका पूर्व जिल्ला उपसभापतीलाई हराए
इटहरी । नेपाली काँग्रेसका राजिव कोइराला प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं। २९ख० बाट चुनावमा उठेका उनले नेकपा एमालेका रामप्रसाद महतोलाई पराजित गरेका हुन् ।
कोइरालाले १७८९२ मत ल्याए भने काँग्रेसका जिल्ला उपसभापतीबाट एमाले प्रवेश गरेका महतोले १६४७५ मत ल्याए....
​एमालेका राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं । संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका राजेन्द्र गौतम विजयी भएका छन् । ११ सय ३० मतान्तरले उनले प्रतिस्पर्धी कांग्रेका दिपक खड्कालाई पराजित गरेका हुन् । गौतमले ३२ हजार ७ सय ६९ मत ल्याए भने खड्काले ३१ हजार ६ सय ३९ मत ल्याए ।
​सर्लाहीको एक मतगणनास्थलमा राजपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप
सर्लाही । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणनास्थल सर्लाही क्याम्पस मलंगवामा राजपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच ढुंगा हानाहान हुँदा केही घाईते भएका छन् ।
प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । सर्लाही क्षेत्र....
​मलाई हराउनेलाई मन्त्री बनाउन सघाउँछु : आरजु
धनगढी । कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा राणाले आफूलाई पराजित गर्ने एमाले सांसद नारदमुनी रानालाई मन्त्री बनाउन आफूले पहल गर्ने बताएकी छन् । पाँच हजार भन्दा बढि मतान्तरमा नारदमुनीसँग कैलाली ५ मा पराजित भएकी राणाले क्षेत्रको विकासका लागि नारदमुनी मन्त्री बन्नुपर्ने बताइन् ।